त्रिविका प्राध्यापक नै बौद्धिक चोरीमा : फ्रान्सेली प्राध्यापकको अनुसन्धान चोरेर आफ्नो नामबाट भारतीय जर्नलमा प्रकाशित « Naya Page
काठमाडौं, २५ फागुन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले नै विदेशी प्राध्यापकहरूको अनुसन्धान चोरेर आफ्ना नाममा प्रकाशन गरेको पाइएको छ । प्रा.डा. परशुराम मिश्रसहित सात जनाले फ्रान्सका प्राध्यापक आर्मेल ली बेलको ‘क्रिस्टल स्ट्रक्चर’ चोरी गरी भारतका जर्नलमा प्रकाशन गरेको छानबिनबाट खुलेको छ ।
मिश्र त्रिविको आंगिक महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका रसायनशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । केही समयअघि मात्रै उनी सेवानिवृत्त भएका छन् । त्यस्तै, अधिकारी, देव र साउ त्रिविमै रसायनशास्त्रमा पिएचडी गर्दैछन् । अधिकारी र साउ त्रिविका प्राध्यापक पनि हुन् ।
उनीहरूले ‘क्रिस्टल स्ट्रक्चर’ को डेटा तोडमोड गरी आफ्ना नामबाट प्रकाशन गरेको छानबिनबाट खुलेको छ । थप आधा दर्जन जर्नलमा छापिएका आर्टिकलमा समेत उनीहरूले चोरी गरेको आशंका भए पनि पुष्टि भएको छैन । ११ वटै प्रकाशनमा प्रा.डा. मिश्र ‘करेस्पोन्डेन्ट’ र बाँकी ६ जना फरक–फरकमा ‘कोअर्थर’ रहेका छन् ।
त्रिविले बौद्धिक चोरीमा संलग्नमाथि सामान्य कारबाही गरेको छ । उपकुलपति बाँस्कोटाका अनुसार छानबिन प्रतिवेदन आइसकेपछि फ्रान्सेली प्राध्यापक बेल र प्रकाशन गर्ने भारतीय जर्नललाई आर्टिकल ‘फेक’ भएको जानकारी गराइएको छ ।
साथै, मिश्रसहितका अनुसन्धानलाई रद्द गर्ने तथा पिएचडी गर्दै गरेकालाई सचेत गराउने निर्णय भएको छ । छानबिन कमिटीले ११ आर्टिकललाई ‘रिट्र्याक्ट’ गर्नुपर्ने, सातजनालाई त्रिविमा अध्ययन अनुसन्धानमा दुई वर्ष निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
त्रिविले पिएचडीलगायत थेसिसमा हुने चोरी रोक्नका लागि सफ्टवेयरबाट चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (सिडिसी) र त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयमा चोरी जाँच गर्ने सफ्टवेयर व्यवस्था गर्ने तयारी भएको बताए ।
‘प्लेजरिजम टेस्ट’ गरिसकेपछि मात्रै थेसिस स्वीकार गर्ने तयारी त्रिविले गरेको हो । सिडिसीले सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले यस्तो सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट